Zuva: Kukadzi 2, 2020
Minister Turhan İyidere Ongorora İkizdere Highway Inoshanda
Cahit Turhan, Gurukota rezvekutakura nekuvaka, vakaongorora Iyidere-Ikizdere Highway, vakasangana nevatengesi uye vagari mudunhu reIkizdere mushure memusangano panzvimbo yekuvaka nzira inoenderana nebasa ririkuenderera mberi. Minister vakataura mashoko kuvatori venhau apa [More ...]
Bhatani rakadzvanywa neBursa Northern Peripheral Highway!
Gadziriro dzekushandurwa kwenzira muchikamu cheIstanbul-Bursa-İzmir Highway chirongwa, chinounzwa kuchirongwa negweta Nurhayat Altaca Kayışoğlu, nhengo ye CHP Bursa Nhengo yeParamende uye Bureau yeParamende. [More ...]
İmamoğlu, Pendik Kaynarca Tuzla Metro Kuvaka Kuvhura Mangwana muPendik
Ekrem İmamoğlu iri kuuya kuPendik yekuvaka nzvimbo yekuvhura kwePendik Kaynarca Tuzla metro mutsara. Mazita mazhinji akakosha achapinda mhemberero yemasikati uye zvivakwa zvepasi pevhu zvichapera muna 2022. Istanbul Metropolitan Municipality [More ...]
Kadıköy Moda Tram Mutakuri Anotakura Kugona Kuwedzera
Istanbul Metropolitan Municipality yakawedzera huwandu hwechitima paKadıköy Moda Tram Line. Munguva yekushanda yakawanda yezuva, munhu anenge akatakura mutsetse, uyo wakashanda nematatu matatu, wakawedzera neinosvika makumi matatu muzana. Pakati peKadıköy Moda [More ...]
Landslide paSamsun Ordu Highway
Mushure mekuitika kwenzvimbo munzvimbo yeTaşbaşı Mahallesi iri munzira yeRwizi rweBlack Sea, Metropolitan Municipality yakatanga kushanda kuvhura mugwagwa nekukurumidza sezvinobvira nekuita kurwa kunobudirira kubva paminiti yekutanga yechiitiko. Matimu, nyika uye [More ...]
Pendik Kaynarca Tuzla metro mutsetse metro inogovaniswa pane yepamutemo webhusaiti yeMetro Istanbul uye IMM. Iko kumira kweiyo metro mutsara, iyo ichavakwa pamwe chete naAlsim Alarko uye Cengiz, yakatemwa. [More ...]
Nhasi munhoroondo: 2 February 1922 26 kuAnkara muna December
Nhasi muNhoroondo 2 Kukadzi 1922 26 US Mutevedzeri weGurukota rezvekutengeserana, Gillespie, akauya ku Ankara muna Zvita, akanyorera kuDhipatimendi reZvekutengeserana muUS mumushumo, "Hurumende yenyika inoda kuumba hukama hwekutengeserana neUS uye kutsvaga rubatsiro rwemari. [More ...]